Codsiga Mica ee Rinjiyeynta iyo Warshadaha Dharka | Lingshou
Codsiga Mica ee Rinjiyeynta iyo Warshadaha Dharka
(1) Saamaynta Caqabadda
Filimka rinjiga, buufiska jilicsan wuxuu sameyn doonaa aasaas asal ahaan isbarbar socda, sidaas darteed si adag uga hortagaya galitaanka biyaha iyo walxaha kale ee dillaaca, iyo haddii la isticmaalayo budada mica-tayo sare leh (cabirka dhexroorkiisu ugu badnaan yahay ugu yaraan 50 jeer, gaar ahaan 70 jeer), tan Nooca waqtiga muditaanka ayaa sida caadiga ah lagu kordhin doonaa 3 jeer. Maaddaama miiraha mica ay aad uga jaban yihiin resin gaarka ah, waxay leedahay qiime teknoloji iyo mid aad u sareeya.
Marka la soo koobo, adeegsiga budada mica ee tayo sare leh waa hab muhiim ah oo lagu hagaajiyo tayada iyo waxqabadka ka hortagga daxalka iyo gogosha bannaanka. Inta lagu gudajiro geeddi-socodka, ka hor inta filimka rinjiga la adkeynin, mica chips ayaa ku jiifsan doona xiisadda dusha sare ka dibna si otomaatig ah ayay isu dhigaysaa midba midka kale iyo dusha sare ee filimka rinjiga. Jiheynta noocan ah ee iswaafajinta noocan ah waxay si toos ah ugu habboon tahay walxaha sunta ah ee filimka rinjiga geliya, sidaa darteedna ku ciyaaraya saameynta carqaladeynta ugu badan. Dhibaatada ayaa ah in qaab dhismeedka mica qulqulaya uu ahaado mid hagaagsan, maaddaama shirkadaha warshadaha shisheeye ay dejinayaan heerka cabirka dhexroorkiisu yahay ugu yaraan 50 jeer, gaar ahaan in ka badan 70 jeer, haddii kale natiijooyinka ma noqon doonaan kuwo la jeclaan karo, maxaa yeelay khafiif chip waa, aagga weyn ee caqabad wax ku oolka ah ee leh mugga mugga buuxiyaha, taa bedelkeeda, haddii chip-ga uu aad u qaro weyn yahay, markaa ma sameyn karo lakabyo caqabad badan. Taasi waa sababta buuxinta buuxiyaha ee uusan si fudud u laheyn howsha noocan ah. Sidoo kale, daloolin iyo xuub ku haynta mica chip waxay si daran saameyn ugu yeelan doontaa doorkan caqabadaysan (walxaha sunta ah ayaa si fudud u liqi kara). Sida khafiifka ah ee loo yaqaan 'mica chip' waa, aagga weyn ee xannibaadda oo leh mugga unugga buufinku. Saameyn wanaagsan ayaa lagu gaari doonaa cabir dhexdhexaad ah (aad u dhuuban markasta ma fiicna).
(2) Hagaajinta sifooyinka jirka iyo farsamada filimka
Isticmaalka budada dhulka ka samaysan ee budada ah ee mica waxay hagaajin kartaa taxane ah muuqaallo muuqaal ah oo muuqaal ahaaneed iyo farsamo leh filimka rinjiga. Furetu waa astaamaha nafleyda ee buuxiyeyaasha, oo ah, saamiga dhexroor-dhumuc leh oo buufin iyo xajmi dhererkiisu yahay dhexroor buufin leh. Bixiyeyaasha Granular sida ciid iyo dhagxaanta sibidhka sibidhka si loo xoojiyo birta.
(3) Hagaajinta Hantida Ka-hortagga Xiran ee Filimka
Adkeynta resin laftiisa waa mid xadidan, iyo xoojinta noocyada kala duwan ee buufinku ma badna (tusaale ahaan, budada talcum). Taas bedelkeeda, mica, oo ah mid ka mid ah qaybaha granite, waa mid aad u weyn marka loo eego adagnaanteeda iyo awoodeeda farsamo. Sidaa daraadeed, ku darista mica sida buuxinta, waxqabadka anti-xiro ee jaakadaha si weyn ayaa loo hagaajin karaa. Taasi waa sababta budada mica loo doorbidayo rinjiga baabuurka, rinjiga wadada, dharka farsamada ka-hortagga-daxalka iyo gogosha darbiga.
Mica, oo leh heer aad u sarreeya oo iska caabin ah ee korantada (1012-15 ohm · cm), lafteeda ayaa ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee laydhsiga waana tikniyoolajiyad caan ah oo loo yaqaan bulshada si ay ugu isticmaasho hagaajinta hantida korantada ee filimka rinjiga. Waxa xiisaha leh ayaa ah in marka la shaqeynayo walxaha iskujira ee dabiiciga dabiiciga dabiiciga ah iyo silicon dabiici ah iyo boric resin, ay u rogi doonaan nooc walax dhoobada leh oo leh xoog farsamo oo wanaagsan iyo dayactirka hantida mar ay la kulmaan heerkul sarreeya. Sidaa daraadeed, silig iyo fiilo laga sameeyay shey noocan oo kale ah ayaa wali sii wadan karta hantidooda asalka ah xitaa dabka kadib, taasoo aad muhiim ugu ah miinooyinka, tunelada, dhismayaasha khaaska ah iyo tas-hiilaadka, iwm.
(5) Ka hortagga ololinta
Budada Mica waa nooc ka mid ah sheyga dab-u-qaadda ee dabeesha waxaana loo isticmaali karaa in lagu sameeyo rinjiga-ololka iyo rinjiga dabka u adkeysan kara haddii lagu dabaqo maaddada dabiiciga ah ee halogen.
(6) Ka hortagga UV-UV iyo Infrared Rays
Mica waxay aad ugu fiican tahay difaacida shucaaca 'ultraviolet' iyo falaaraha 'infakshannada' iwm. Markaas darteed ku darista budada mica moolka dhulka ee rinjiga bannaanka waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa waxqabadka filimka ee ka hortagga al-ultraviolet waxayna hoos u dhigtaa gabowgeeda. Waxqabadka ay ka sameysay difaaca fallaaraha kaabayaasha, mica waxaa loo isticmaalay samaynta ilaalinta kuleylka iyo agabyada xakamaynta kuleylka (sida rinjiga).
(7) Yaraynta goynta
Waxqabadka xannibaadda ee dhul-gariirka mica waa mid aad u fiican. Chipsyada aadka u khafiifka ah iyo kuwa yar-yar waxay si joogto ah u joojinayaan dhex-dhexaad la'aan iyada oo aan la kala saarin isbeheysiga. Sidaa darteed, marka loo isticmaalayo budada mica sida buufin halkii taas si fudud hoos loogu dhigi lahaa, xasilloonida kaydinta daaha ayaa si weyn kor ugu kici doonta.
(8) Shucaaca Kuleylka iyo Koofiyadaha-Heerkulka Sare
Mica waxay leedahay awood weyn oo ay ku iftiimin karto raysyada infrared. Tusaale ahaan, markay la shaqeynayaan macdanta birta, iwm, waxay abuuri kartaa saameyn shucaac oo heer sare ah. Tusaalaha ugu caansan waa codsigiisa ku saabsan jaakadaha diyaaradda (yareynta heerkulka dhinaca qoraxda dhinaca tobanaan darajo). Sawiro badan oo rinjiyeynta walxaha kuleylka ah iyo tas-hiilaadka heerkulka sareeya ayaa dhammaantood u baahan inay isticmaalaan rinjiga khaaska ah ee ay ku jiraan budada mica, sababta oo ah jaakadaha noocan oo kale ah ayaa wali lagu shaqeyn karaa marka heerkulku aad u sarreeyo, sida 1000 ℃ ama wax la mid ah. Waqtigaas birta waxay noqoneysaa mid kulul oo kulul, laakiin rinjiga ayaa weli ah mid aan waxyeello gaarin.
(9) Saamaynta gloss
Mica waxay leedahay glosscent pearlescent wanaagsan, sidaa darteed, marka la adeegsanayo badeecado waaweyn oo mica-ah khafiif ah oo mica ah, agab, sida ranjiyeyaasha iyo jaakadaha, waxay noqon karaan dhalaalaya, dhalaalaya ama dib u milicsanaya. Taa bedelkeeda, budada mica-super-finic-ganiga ah waxay sameyn kartaa soo noqnoqosho iyo is-afgarad ka dhex dhaca agabyada, sidaas darteed waxay abuuraysaa saameyn dabacsan.
(10) Saameynta Waxyeelada Dhawaaq iyo Vibration
Mica waxay si weyn u beddeli kartaa taxane qaabdhismeedka jirka ee sheyga sidoo kale waxay sameyn kartaa ama badali kartaa muuqaalkeeda viscoelastic. Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay si wax ku ool ah u nuugi karaan tamarta gariirka sidoo kale waxay daciifiyaan shoogga iyo mowjadaha dhawaaqa. Intaa waxaa sii dheer, mowjadaha shoogga iyo hirarka dhawaaqa waxay sameyn doonaan ifcelinno isdaba-joog ah oo udhaxeeya mica chips, taas oo sidoo kale keenta daciifinta tamarta. Sidaa darteed, mica dhulka qoyan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu diyaariyo alaabada dhawaqa dhawaaqa iyo gariirka.